China Ukutshintsha inaliti yesiNtu kunye nokuSonta umsonto 20Khz Ultrasonic Welding Machine for Thermoplastic amalaphu Ukwenziwa kunye nefektri | Qianrong
Ukutshintsha inaliti yesiNtu kunye nokuThungwa kwemisonto 20Khz Umatshini weWelding weWelding waMalaphu eThermoplastic
Into No QR-S20DL
Ububanzi ivili welding 22mm
Ihambelane neTransducer 5020-4D IPZT4
Ubungakanani bejenaretha 400 * 195 * 98mm
Umatshini wokuthunga we-ultrasonic unokuthunga amalaphu amaninzi e-thermoplastic. Xa kuthelekiswa nenaliti eqhelekileyo kunye nokuthunga umsonto, ukuthunga i-ultrasonic akufuneki ngenaliti kunye nomsonto, amandla aphezulu okuthunga, ukutywina okuhle kunye nesantya sokuthunga ngokukhawuleza. Kwaye ukuthungwa kwe-ultrasonic engenamthungo kusombulula ngokupheleleyo ingxaki yokuba intshukumo yokuhamba kwentloko ye-welding yentloko ayihambelani nolawulo lwelaphu, kwaye ingxaki yokungahambelani iya kuthatha indawo yomatshini wokuthunga oqhelekileyo.
Izinto eziluncedo ukuthunga seamless
1. Uzinzo oluphezulu: Ivili lokuwelda kunye noxinzelelo lwevili zijikeleza ngokuhambelana ngokupheleleyo ngexesha lokuthungwa kwe-ultrasonic engenamthungo, akukho mahluko kwisantya nakwi-engile, kwaye ayizukubangela ukolula, ukugqwetha okanye ukushenxa kwelaphu, elichaneke ngokugqibeleleyo. Ngombulelo kwisiphumo eshushu esinyibilikayo, akukho sidingo sokusebenzisa umsonto wenaliti, imveliso ayinamanzi ngakumbi, ilula kwaye kulula ukuyisonga.
2.Ukuvumelanisa nge-Welding kunye nokusika: I-Ultrasonic izixhobo zokuthunga ezingenamthungo azilungelanga kuphela ukuthungwa okuqhubekayo, kodwa ziyakunqumla iingubo ngelixa liwelda, kwaye liqonde ukubopha okuzenzekelayo.
3. Akukho radiation ye-thermal: Amandla angena kuludwe lwezixhobo ze-welding ngexesha lokuthungwa kwe-ultrasonic, kwaye akukho radiation ye-thermal. Ngexesha lokuthunga okuqhubekayo, ubushushu abuyi kugqithiselwa kwimveliso, ebaluleke ngokukodwa ekupakisheni iimveliso ezinobushushu.
4. Umthungo olawulayo wewelding: Ilaphu litsalwa livili le-welding kunye noxinzelelo lwe-roller, udlula kulo, kwaye ilaphu lidityaniswa ngamaza e-ultrasonic. Ngokutshintsha isondo lokuhambisa uxinzelelo, ubungakanani bomphetho we-welding kunye ne-embossing zingatshintshwa.
5. Uluhlu olubanzi lwezicelo: Zonke ii-thermoplastic (zithanjisiwe emva kokufudumeza) amalaphu, iiteyiphu ezikhethekileyo, kunye neefilimu zinokudityaniswa kusetyenziswa izixhobo zokuthunga ezingenamthungo ze-ultrasonic, kwaye izileyi zenziwe ngentsimbi eqinisiweyo ukwandisa ubomi benkonzo.
Egqithileyo I-20Khz ye-Ultrasonic yeplastiki yeWelding Matshini yeThermoplastic Material
Okulandelayo: Ukuphakama okuphezulu kwe-35Khz 1000w ye-Ultrasonic yokuTywina izixhobo zeThermoplastic Cloth